Readdle Zvinyorwa zvinokutumira iwe kutumira mafaira kubva kuMac yako kuenda kune yako iPhone pamusoro peWiFi | Ndinobva mac
Readdle Zvinyorwa zvinokutumira iwe kutumira mafaira kubva kuMac yako kuenda kune yako iPhone pamusoro peWiFi
Ruben gallardo | | Mac zvirongwa
Iyo Readdle Zvinyorwa app yakagadziridzwa. Kusvika pakudaro zvekuti kubva zvino zvichienda mberi tichagadzirisa gwaro rekuvhota kana tichiendesa zvinyorwa pakati peboka redu reIOS neMac yedu kana zvinopesana Kubva ikozvino zvichienda mberi iwe uchave unowanikwa itsva nzira ye bata zvinyorwa kuburikidza nekufambisa kweWiFi.
Chokwadi ndechekuti kutakura chishandiso ichi chakaiswa pane yako iPhone kana iPad kwakafanana nekutakura banga remauto eSwitzerland. Kugadzirisa magwaro kuri nyore kwazvo. Saka zvino, NeMagwaro 6.5 vhezheni iwe yaunogona kushandisa yeWiFi tekinoroji kuendesa mafaira pakati pemakomputa. Aya ndiwo matauriro anoita iye pachake kuburikidza nebhurogi rake pa nzira.
Zvinyorwa 6.5 zvichave chishandiso chiri nyore kwazvo kushandisa. Iwe unongofanirwa kubatanidza makomputa maviri uye iwe unozokwanisa kuendesa zvinyorwa zvako kubva kuMac kuenda kuI iPhone kana iPad ipapo ipapo. Kushanda kwayo kuri nyore kwazvo, sekunge iwe urikuzviita uchishandisa AirDrop, asi mune ino nzira yekudyara.
Sezvatsanangurwa kwatiri kubva kukambani, unofanirwa kuisa kero inotevera kubva kuMac yako: http://docstransfer.com/. Zvaunofanirwa kuita zvichaonekwa pachiratidziri. Iwe uchaona kuti kurudyi ine kodhi yeQR. Izvi zvinofanirwa kuongororwa nekamera yeyako iOS chishandiso. Asi izvi unofanira tinya pane chakaita segore-icon yeiyo App (iyo inoreva "masevhisi") uye sarudza sarudzo "Wi-Fi Transfer". Panguva ino iwe uchazobvunzwa mvumo yekuwana iyo kamera yefoni nhare kuti ugone kuongorora iyo QR kodhi uye kubatanidza zvese zvishandiso.
Panguva iyoyo chaiyo, uye mushure memasekonzi mashoma wakamirira kubatana, akawanda magwaro anozivikanwa kwazvo kwauri achaonekwa pachiratidziri. Chaizvo, ndiwo magwaro aunayo pane yako iPhone kana iPad uye kubva kwaunogona kudhawunirodha kuMac kana kurodha magwaro aunofunga kuti anokosha kune yako iOS chishandiso kuti ufambe uchifamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Readdle Zvinyorwa zvinokutumira iwe kutumira mafaira kubva kuMac yako kuenda kune yako iPhone pamusoro peWiFi
Kingpin Webhu Bhurawuza ibhurawuza ine adblock uye incognito maitiro anogara aripo
Audio Hijack inovandudzwa pamwe nehupenyu hwekutsigira rutsigiro